စထရွန်တီယမ် - ဝီကီပီးဒီးယား
စထရွန်တီယမ် (Strontium)သည် ပျော့ပျောင်းသော ငွေဝါရောင် alkaline-earth metal ဖြစ်သည်။ ပုံဆောင်ခဲ အသွင်သုံးမျိုးရှိသည်။ ရုပ်ဂုဏ် နှင့် ဒြပ်ဂုဏ်သတ္တိတို့မှာ ကယ်လစီယမ်၊ ဘေရီယမ် တို့နှင့် ဆင်တူသည်။ စထရွန်တီယမ်သည် ရေနှင့် တက်ကြွစွာ ဓာတ်ပြုနိုင်ပြီး လေနှင့် ထိတွေ့လျှင်လည်း အရောင်မှေးမှိန်တတ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းသတ္တုအား သဘာဝတွင် သီးခြားမတွေ့ရပဲ အခြားဒြပ်စင်များနှင့် ပေါင်းစပ်၍သာ တွေ့ရှိရသည်။ သေးငယ်သော စထရွန်တီယမ် အမှုန့်ကလေးများသည် လေမှာ လွယ်ကူစွာ လောင်ကျွမ်းရင်း စထရွန်တီယမ်အောက်ဆိုဒ် နှင့် စထရွန်တီယမ် နိုက်ထရိတ် တို့ကို ထုတ်လွှတ်ပါသည်။
/ˈstrɒnʃiəm/ or /ˈstrɒntiəm/
ရူဘီဒီယမ် ← စထရွန်တီယမ် → အိတ်တြီယမ်
William Cruickshank (၁၇၈၇)
အတည်ငြိမ်ဆုံး စထရွန်တီယမ်၏ အိုင်ဆိုတုပ်များ
စထရွန်တီယမ်သည် ကယ်လစီယမ်၊ ဘေရီယမ်တို့နှင့် ဆင်တူသော်လည်း ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားသောကြောင့် အသုံးချခြင်း နည်းပါးသည်။ လင်းလက်တောက်ပသော အချက်ပြမီးများ၊ မီးချူးမီးပန်းများ စသည့်လုပ်ငန်းများတွင် အနည်းငယ်အသုံးပြုသည်။ အများစုမှာ ကာဗွန်နိတ်အဖြစ် တီဗွီဖန်သားပြင် နှင့် ထူးခြားကောင်းမွန်သော ဖန်သားများထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုကြသည်။ စထရွန်တီယမ်၏ isotope တစ်ခုဖြစ်သော Strontium-90 မှာ အန္တရာယ်ရှိသော်လည်း အနုမြူ ဓာတ်ပေါင်းဖိုမှ ထွက်သောဘေးထွက်ပစ္စည်းမျာထဲတွင် အသုံးဝင်ဆုံးသော ဘေးထွက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို ဘေးထွက်ပစ္စည်းထဲမှ ထပ်ဆင့်လောင်စာကိုပင် ထုတ်ယူနိုင်ပါသေးသည်။ Strontium-90 ၏ စွမ်းအင်မြင့်မားသော ဓာတ်ရောင်ခြည်များကို လျှပ်စစ်ထုတ် ဂျင်နရေတာများ အစပျိုးလည်ပတ်စေရန် ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အာကာသစခန်းများ၊ မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းစောင့်ကြည့်ရေး စခန်းများနှင့် လေကြောင်းထောက်လှမ်းရေးဌာနများတွင် ၎င်းနည်းပညာကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
သဘာဝတွင်တွေ့ရှိရသော စထရွန်တီယမ်များမှာ မီးသင့်ကျောက်များ၏ ၀.၀၃၄ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သော တွင်းထွက်ဆာလဖိတ်ပုံစံ (Celestite, SrSO4) နှင့် ကာဗွန်နိတ် စထရွန်တီနိတ် (SrCO3) တို့ဖြစ်ကြသည်။ Celestite များကို အသင့်အတင့် အရွယ်အစားရှိသော အနည်ကျကျောက်လွှာများတွင် များစွာတွေ့ရသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝမ်းလုံးမှ သတ္တုတွင်းများတွင် တစ်နှစ်လျှင် စထရွန်တီယမ်အရိုင်း တန်ချိန် ၁၄၀ ခန့်မျှထုတ်လုပ်လျက် ရှိသည်။ အစားအစာများတွင် စထရွန်တီယမ်၏ ပါဝင်မှုမှာ အလွန်းနည်းပါးသည်။ (ဥပမာအားဖြင့် ..ဂျုံတွင် (0.4 ppm)၊ ဂေါ်ဖီထုတ် တွင် (45 ppm)၊ ကြက်သွန်များတွင် (50 ppm))။ (1 ppm = 1 part per million = 1 microliter per liter)
စထရွန်တီယမ်ကွန်ပေါင်းများတွင် ရေမှာပျော်ဝင်သောဒြပ်ပေါင်း နှင့် မပျော်ဝင်သော ဒြပ်ပေါင်းဟုရှိရာ ရေမှာပျော်ဝင်သော ဒြပ်ပေါင်းများက ဘေးဥပါဒ်ပို၍ဖြစ်စေတတ်သည်။ သောက်သုံးရေကိုလည်း ညစ်ညမ်းစေတတ်သည်။ သို့သော်လည်း သောက်သုံးရေတွင် ယင်း ဒြပ်ပေါင်းများ၏ ပါဝင်မှုမှာ မရှိသလောက်နည်းပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် လေထုထဲမှ ဖုန်မှုံ့များကို ရှူရှိုက်မိခြင်းကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ မြေကြီးကို ကိုင်တွယ်ခြင်းကြောင့် သော်လည်းကောင်း၊ အစားအစာနှင့် သောက်သုံးရေတို့မှတစ်ဆင့် သော်လည်းကောင်း အနည်းငယ်သော (ရေဒီယိုသတ္တိကြွ) စထရွန်တီယမ် များနှင့်ထိတွေနိုင်သည်။ နို့ထွက်ပစ္စည်းများ၊ အစေ့များ နှင့် သစ်သီးသစ်ရွက်များတွင် စထရွန်တီယမ်ပါဝင်မှု မြင့်မားတတ်သည်။
စီအာရ်တီ ကွန်ပျူတာအရှေ့မျက်နှာပြင်အား စထရွန်နှင့် ဘာရီယမ်အောက်ဆိုဒ်ပါသော မှန်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
လူသားများအတွက် စထရွန်တီယမ် ခရိုမိတ်သည် အဆုတ်ကင်ဆာ ဖြစ်စေနိုင်သည့် အန္တရာယ် အရှိဆုံးသော ဒြပ်ပေါင်းဖြစ်သည်။ ခလေးများတွင် စထရွန်တီယမ် လွန်ကဲစွာ ဝင်ရောက်ခဲ့ပါက အရိုးများကြီးထွားမှုနှုန်းကို ထိခိုက်စေသည်။ အစားအစာနှင့် သောက်သုံးရေများတွင်တော့ ထိုမျှလောက်မြင့်မားသော ပါဝင်မှု မပါရှိပေ။ ရေဒီယိုသတ္တိကြွသော စထရွန်တီယမ်ကြောင့် ကင်ဆာရောဂါများ၊ သွေးအားနည်းရောဂါများ၊ အောက်စီဂျင်ပြတ်တောက်သောရောဂါများဖြစ်စေနိုင်သည့် အပြင် မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ ဆဲလ်များကိုပင် ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် လောင်စာများ(ကျောက်မီးသွေး၊ လောင်စာဆီအမျိုးမျိုး စသည်) လောင်ကျွမ်းခြင်းကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွင် စထရွန်တီယမ်၏ပါဝင်ကိန်းမှာ မြင့်တက်လျက် ရှိသည်။ ဖုန်မှုံ့များတွင်ပါဝင်သော စထရွန်တီယမ်များသည် ရေမျက်နှာပြင် နှင့် မြေမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် ကျရောက်အနည်ထိုင်ကြသည်။ အနည်မကျသော စထရွန်တီယမ်များမှာ မိုးရေများ နှင်းများနှင့်အတူ ကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်သို့ ပြန်လည်ကျရောက်ကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင် အားလုံးသောစထရောင်တီယမ်များမှာ ရေမျက်နှာပြင်အောက်တွင် စုပေါင်းမိကြသည်။ အချို့မှာ ရေနှင့်အတူပျော်ဝင်သွားကြပြီး အချို့မှာ အနည်ထိုင်သွားကြသည်။ ထို့ကြောင့် စထရွန်တီယမ်ပါဝင်သော ရေများမှာ စေးပျစ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဆိုးကျိုးများစတင်ဖြစ်ပေါ်တော့သည်။ ရေထဲသို့ အညစ်အကြေးများ တိုက်ရိုက်စွန့်ပစ်ခြင်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများမှထွက်သော စထရွန်တီယမ် အမှုံများ နှင့် လေထုထဲမှ ဖုန်မှုန့်များ ရောစပ်ဓာတ်ပြုခြင်းတို့ကြောင့် စထရွန်တီယမ် ၏ ပါဝင်ကိန်းမှာ အဆမတန် မြင့်တက်လျက် ရှိသည်။ ရေမှာပျော်ဝင်သော စထရွန်တီယမ်များကြောင့် ရေအရင်းမြစ်များ ရှားပါးခြင်း၊ စထရောင်တီယမ် ပါဝင်သော သောက်သုံးရေများကြောင့် သက်ရှိများကို ထိခိုက်စေခြင်းစသည့် ဆိုးရွားသော ကွင်းဆက်အန္တရာယ်များ တဆက်တည်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။
ရေဒီယိုသတ္တိကြွသော စထရွန်တီယမ်မှာ သဘာဝတွင်မတွေ့ရသော်လည်း လူသားများ၏ အနုမြူဗုံး စမ်းသပ် ဖောက်ခွဲခြင်းများကြောင့် ယင်းအိုင်ဆိုတုပ်များ(isotopes) ၏ ပါဝင်ကိန်းမှာလည်း မြင့်တတ်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ အန္တရာယ်ရှိသော အိုင်ဆိုတုတ်များအား လျှော့ကျစေရန် ယင်းအိုင်ဆိုတုပ်များအား တည်မြဲသော ဇာကွန်နီယမ် (Zirconium) ဒြပ်စင်အဖြစ်သို့် ရေဒီယိုသတ္တိယို့ယွင်းစေနည်း (radioactive decay) ဖြင့်သာလျှင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
မှတ်ချက်။။ Vanderwaals radius – ယင်းအတိုင်းအတာကို ပုံဆောင်ခဲများရှိ ပေါင်းစည်းမှုမရှိသော အက်တမ်စုံတွဲများ (pairs of unbonded atoms) အကြား အကွာအဝေးအားဖြင့် တိုင်းတာသည်။ Ionius radius – မှန်ကူကွက်ပုံစံ ပုံဆောင်ခဲ (crystal lattice) တစ်ခုတွင်ရှိသော အိုင်းယွန်းတစ်ခု၏ အတိုင်းအတာ။ Energy of ionization – (အိုင်းယွန်းဖြစ်စွမ်းအင်) အက်တမ်တစ်ခုမှ အီလက်ထရွန် တစ်ခုကိုဖယ်ထုတ်ပြီး အိုင်းယွန်းဖြစ်ရန်လိုအပ်သည့် စွမ်းအင်။ အီလက်ထရွန်များကို ဆက်တိုက်ဖယ်ထုတ်ခြင်း အားဖြင့် ဒုတိယ တတိယ ဆက်တိုက်အိုင်းယွန်းဖြစ်စွမ်းအင်များဖြစ်လာကြပြီး တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် စွမ်းအင်များ ကြီးလာကြသည်။
↑ "High-Resolution Infrared Emission Spectrum of Strontium Monofluoride" (1996). J. Molecular Spectroscopy 175. doi:10.1006/jmsp.1996.0019. Bibcode: 1996JMoSp.175..158C.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စထရွန်တီယမ်&oldid=723170" မှ ရယူရန်
၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။